ကက်စကိတ်စတိုင်များ Martech Zone
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 9, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါကြီးစွာသောဖြတ်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် တိုင် သင်၏ CSS ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ပြောသော Attackr.com တွင်ယနေ့ဖြစ်သည်။ Cascading Style Sheets များသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကောင်းဆုံးနှင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသည့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄ င်းသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏အမြင်အာရုံအလွှာကိုအမှန်တကယ် HTML (သို့) သင့်ဆိုဒ်နောက်ကွယ်ရှိကုဒ်များနှင့်ခွဲခြားထားသည်။ style sheet ကို browser ကဖတ်တယ်၊ ဒါကြောင့် high-traffic ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့် page ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို server အစားမဟုတ်ဘဲ browser မှာထားလိုက်ပြီ။
CSS သည်သင့်အား HTML သို့မဟုတ်သင်၏ back-end ဖိုင်များကိုပြုပြင်ခြင်းမပြုဘဲသင်၏ site သို့ 'fly' ပေါ်တွင်အမြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်…သင်၏ user interface ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၏ application ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ CSS file အသစ်ကိုတင်ရုံသာဖြစ်သည်။ CSS2သည်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုပင်ပြုလုပ်သည်။ အမှန်တကယ်စာသားအပြောင်းအလဲများအပါအဝင်အမြင်အာရုံတိုးမြှင့်မှုများစွာကိုပေးသည်။
ဒီနေ့ငါသုံးခဲ့တဲ့ကိရိယာက CSSTidy။ ငါ command-line ကို interface ကိုသော application ကိုဗားရှင်း download, ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖိုင်၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရုံသာမကဖတ်ရှုရန်အလွန်လွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်၏စတိုင်လ်စာရွက်ကိုလည်းစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ application လေးပါ။ App တစ်ခုမကူးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Online version ရှိနေပြီ။
CSS ဒီဇိုင်း၏ Zen - ကျော်ကြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသောစာအုပ် CSS Zen ဥယျာဉ်.
StyleMaster - မှ နေပြည်တော်ဤသည်မှာအလွန်အားကောင်းတဲ့ CSS တည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များရှိသည်။
W3 ကျောင်းများ CSS ကို
HTMLHelp အပေါ် CSS ကို
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုထပ်ထည့်ပါ။ ငါအထူးသဖြင့် CSS ၏တိုးတက်မှုများနှင့်ဘရောင်ဇာအထောက်အပံ့ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားသည်။ Firefox သည် CSS2 ကိုထောက်ပံ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်း CSS7 အတွက် IE2 ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်မကြားရပါ။
အကြိုက်ဆုံးသည် Technorati အပေါ်ရေတွက်ပါသလား။
Arrr! Pirate Day လိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ
24:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 37 မှာ
နောက်ထပ် ကြီးကျယ်တဲ့ ဝင်ခွင့်ကို ငါတွေ့တယ်။ Blogging Pro အတွက် CSS Optimization တွင်